Ihowuliseyili Super lightweight encinci encinci motor motor racing racing Umvelisi kunye noMthengisi | IIMI
Isithuthuthu sokubaleka esincinci esincinci esincinci esincinci esiphakathi
Le e-bhayisekile ikhawulezayo ine-motor embindini. Ulawula umboniso weLCD ovumela ukuba uthathe isigqibo kwinqanaba lokufumana uncedo olufunekayo, okwenza iNdlela yeNdlela ilungele kungekuphela iflethi, kodwa kunye nembonakalo yelizwe eneenduli. Isamsung 36V / 8Ah ibonelela ngoluhlu lwama-50km ngentlawulo enye kwaye intlawulo yebhetri epheleleyo inokufezekiswa ngaphakathi kweeyure ezingama-4-5.
I-drive engasindi engama-250W embindini wemoto inikezela ngokukhetha isantya esi-5 kunye namanqanaba ama-5 oncedo lwamandla, ekuvumela ukuba ukhethe isantya esifanelekileyo kunye nokungenisa elizweni phantsi kwemigangatho ye-EN15194.
Incinci yeZiko leMoto kwiNtengiso
Kufakwe kwi-crank, i-motor encinci ye-250W ibonelela ngokuhambisa ngokuthe ngqo kwamandla kunye nokukhwela okunamandla ngakumbi. Yomelela, ikhuselekile, isebenza ngokufanelekileyo kwaye ithule. Yenzelwe ukumelana namanzi kunye neqabaka. Iya kukhusela ibhetri kunye nemoto ngokunjalo.
Tektro Auriga ngesanti kubunzulu baphantsi Disc Brake
Iziqhoboshi ezinokuthenjwa ngokwenene! Uhlobo olutywinwe ngokupheleleyo lwe-brake hydraulic ludinga ukugcinwa kwemihla ngemihla njengoko kuncinci kakhulu ukubakho kweentambo ezingcolisekileyo okanye ngentambo. Iinkqubo zeHydraulic nazo, ngobukrelekrele, zilungelelanise ukuziqhekeza, ke awunyanzelekanga ukuba uphephele kwizilungisi zemigqomo okanye iintambo zokubuyisa kwakhona. Eyokugqibela!
IiRoadspark zixhotyiswe nge8Ah / 36V (288Wh) Li-ion Polymer ibhetri eneselfowuni yesamsung. Ibhetri ye-8Ah inebanga ukuya kuthi ga kwi-50km. Ibhetri ifihliwe kwisakhelo, esenza oku kungabonakali njengebhayisekile yombane.
Umbala weLcd Umboniso
Ngombala we-lcd, kuya kuba lula ukufunda ulwazi olufana nemayile, isantya, iyunithi yamandla njlnjl. Umboniso lolunye uhlobo lolwazi lweBluetooth, unokufunda kwifowuni yakho, upholile. IGPS ikunceda ufumane ibhayisekile yakho. Akukho mfuneko yokuba nexhala lokuba kubiwe.
Inqanaba le-5 lokuNcedisa ukuNceda inzwa yentsimbi
F: I-SRAM 2s isantya R: I-Sram 11s Derailleur
Aluminium ingxubevange ifolokhwe ziqinile
Isantya se-11x 11SRAM 11-34 Ikhasethi yamazinyo
Uhlobo lweMTB olwandisiweyo 60MM
I-SRAM yokulwa nobhontsi weShifter
Egqithileyo Ngasemva Strong cwaka Motor Motor Electric ibhayisekile
Okulandelayo: Ukusebenza okuphezulu kokumiswa okupheleleyo kwebhayisekile yentaba